Ministeerri Ittisa Ameerikaa Jems Mattis taayitaa gad lakkisuu beeksise - NuuralHudaa
Sa’udiin Sodaa Dhibee Vayirasii Koronaa hordofuun Imala Sirna Umraaf garasitti taasiifamu yeroodhaaf dhaabuu beeksiste
Godina Arsii Aanaa Roobee magaalaa Roobeetti barattoota Muslimaa sababa Jilbaabaaf dararuun itti fufee jira
Ityoophiyaan Marii dhimma hidha laga Abbaay irratti marsaa kana geggeessuuf karoorfame irratti kan hirmaanne tahuu beeksiste
Mana keessan qabroota hin godhinaa
Himatni namoota 63 kan sarbaminsa mirga namoommaa fi malaammaltummaan shakkamanii adda cituun ibsame
Haleellaa Finxaaleeyyiin Amantaa Hinduu, Muslimoota irratti raawwataniin namoonni 7 ajjeefamanii, 150 ol immoo madaawan
Prezidaantiin Masri Duraanii Husnii Mubaarek ganna 91 tti Du’e
Dhibeen Vayirasii Koroonaa biyyoota Baha Jiddu Galeessaa keessatti saffisaan babal’ataa jira
Muummichi ministeera Maleezhiyaa Dr. Mahtir Muhammad angoo gadi lakkisuuf qophaayaa jiraatuu gabaafame
Magaalaa Sigimootti leenjiin Ulamootaa fi Du’atoota Keenname
Home/Odeeyfannoo/Ministeerri Ittisa Ameerikaa Jems Mattis taayitaa gad lakkisuu beeksise
Ministeerri Ittisa Ameerikaa Jems Mattis taayitaa gad lakkisuu beeksise
James Mattis xalayaa hujii gad lakkisuu Waayihaawusiif barreesse irratti, Prezdaant Traamp waliin garaa garummaa Imaammataa bal’aa tahe kan qabu tahuu ibsuun, prezdaanticha waliin dhimmoota heddu irratti walii galuu dadhabuu isaa ibse. Jeneraal Mattis Xalayaa kanaan “Traamp namoota ilaalcha isaa fudhatanii waliin hojjachuu dandayan muuduu mirga guutuu qaba” jedhe.
James Mattis taayitaa gad lakkisuu kan beeksise tahus, Donald Traamp gama isaatiin “Jeneraal James Mattis Ji’a February dhufu kabajaan ni geggeefama” jechuun gama Twitter isaatiin beeksise. Haa ta’u malee Traamp Ministeerri Ittisa Ameerikaa itti aanu eennu akka tahu hin ibsine.
Dhimmoota James Mattis fi Donaald Traamp jiddutti wal dhabdee hammeesse keessa tokko, waraanni Ameerikaa hundi hatattamaan Suuriyaa keessa akka bahu murtii prezdaant Traam dabarse tahuu odeeyfannoon arganne ni mul’isa. Murtii Traamp kana qondaaltonni Ameerikaa ol’aanoon fi biyyoonni michuu Ameerikaa, karoora ifa tahe osoo hin qopheessin loltoota hunda Suuriyaa baasuun balaa hamaa qaba jechuun qeeqaa jiran. Haata’u malee Traamp haaluma wal fakkaatuun loltoota Ameerikaa Afgaanistaan keessaa baasuuf kan karoorsaa jiru tahuu gabaasni arganne ni mul’isa.
James Mattis Ministeera Ittisa Ameerikaa